आश्चर्यजनक नयाँ ईमेल डिजाइन (आवश्यक) | Martech Zone
बुधबार, जुन 25, 2008 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
यहाँ अर्को ईमेल छ जुन मैले प्राप्त गर्न मन पराउँछु, तर सामान्यतया केहि पनि नगर्नुहोस्! यो छ डाउनटाउन इंडियानापोलिस, आश्चर्यजनक नयाँ ईमेल.
म सदस्यतामा रहन्छु किनकि मलाई आशा छ कि नयाँ डिजाइन आउँनेछ - जानकारीका लागि डाउनटाउन इंडियानापोलिस प्रचार गर्नुहोस् सबै त्यहाँ छ, तर डिजाईनले ईमेललाई अपठनीय र उपयोग गर्न लायक बनाउँदछ। यहाँ किन छ:
वास्तविक वेबसाइटको लागि प्रमुख जानकारीमा कुनै मुख्य लिंक छैन इन्डी डाउनटाउन इंक हुनसक्छ त्यो एक अवलोकन हो, तर मलाई लाग्छ कि यसलाई वास्तवमै यसको आवश्यक छ।
हेडरमा छविहरू सानो र बेकार हुन् - म तिनीहरूलाई बाहिर पनि बनाउन सक्दिन। मेरो अनुमान यो छ कि जसको ईमेलले डिजाईन गरेको थियो त्यसको सानो रिजोलुसन छ म भन्दा उनीहरू अझ ठूला देखिन्छन्। तिनीहरूले बहुमूल्य ठाँउ लिइरहेका छन् 'पट्टि माथि'… त्यो स्थान जुन वास्तवमा व्यक्ति गर्न सक्छन् हेर्नुहोस् जब उनीहरू आफ्नो ग्राहकमा ईमेल खोल्छन्।
बाँया पहिलो अनुच्छेद, आईडीआई बाट एक शब्द, एक गरिब शीर्षक र अनकम्पाइलिंग हो। हुनसक्छ मान्छेहरु लाई आईडीआई के हो थाहा छैन?
फन्ट आकार सानो, अपठनीय छ, र अनुच्छेद ब्रेक वा बुलेटहरू छैनन् मेरा आँखा सामग्री स्किम गर्न अनुमति दिन। नतिजाको रूपमा, मैले यसलाई पढिनँ! छवि ठूलो कल थियो, यद्यपि!
क्यालेन्डर घटनाहरू यस ईमेलको बारेमा राम्रो चीज हुनसक्दछ, तर घटनाहरूमा कार्यको लागि कुनै कल छैन ... मलाई टिकट किन्नको लागि लिंक प्रदान गर्नुहोस् र प्रत्येक घटनामा थप जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् ताकि म जान सक्दछु! म यहाँ घटना हेर्न जाँदैछु र गुगलमा खोजी गर्न प्रयास गर्दिन। मसँग त्यो समय छैन!
सामग्री फोडा र पातलो स्तम्भहरूमा अनावश्यक रूपमा स्क्वुश गरिएको छ। व्यक्तिहरू अब ठूलो रिजोलुसनको साथ धेरै मोनिटरहरूमा छन् ... to०० देखि १००० पिक्सेल चौडा ढाँचामा सार्नुहोस्। किनकि तपाईंको पात्रो सहि साइडबार हो, प्रयोगकर्ताले साइडबारमा पुग्न र त्यसपछि यसलाई पढ्न तेर्सो स्क्रोल गर्न मन पर्दैन।
स्तम्भहरू स्क्वाश गरियो
१ मा ...
त्यहाँ मात्र छ
शब्द र यो हो
ईमेलमा कार्य गर्न कम्तिमा एउटा जबरजस्ती कल हुनु आवश्यक छ। के तपाइँ शहर मार्केट भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ? कन्सर्ट टिकट किन्नुहोस्? मलाई action० को छनौटको सट्टा मलाई कार्यको लागि एक अद्वितीय कल दिनुहोस्। मलाई त्यहाँ बताउने सबै अन्य मानिसहरू भन्दा एउटा चीजको बारेमा बताउनुहोस्।
यदि तपाईं कोठाको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने अवतरण पृष्ठहरू र अंशहरू समावेश गर्नुहोस्। 'पूर्ण कहानी' को लिंकको साथ एक छोटो अंश लेख्नुहोस् जुन मलाई सास फेर्ने कोठा र थप जानकारीको साथ पृष्ठमा ल्याउँछ।
मान्छे को चित्रहरु कहाँ छन्? यस ईमेलमा व्यक्तिको हाँस्दै तस्बिरहरू नराख्नु भनेको मलाई ब्रोसर वा समाचार लेख पढिरहेको जस्तो लाग्छ। शहर ईन्डीमा यी घटनाहरू र स्थानहरूको मजा लिइरहेका व्यक्तिहरूका फोटोहरू मसँग कनेक्ट हुनेछन्।
पछिल्लो हप्ता के भयो? कसरी घटना वा व्यवसायको एक महान संचयको बारेमा हो कि तपाईंले ईमेलमा पदोन्नति गर्नुभयो केही टिप्पणीहरूको साथ पाठकहरूको टिप्पणीको साथ उनीहरूसँग कति राम्रो समय थियो। यसलाई व्यक्तिगत बनाउनुहोस्!
मेरो पोइन्ट यस ईमेललाई स्लेम गर्ने छैन। मैले भनें, यो महान जानकारी संग प्याक गरिएको छ ... शायद धेरै! यो स्पष्ट छ कि प्रतिलिपि लेख्ने व्यक्तिहरूले उनीहरूको गृहकार्य गरे - यसलाई अझ राम्रो प्रस्तुतीकरण चाहिन्छ ताकि पाठकहरू उपभोग गर्न र त्यसमा कार्य गर्न सकून्।
टैग: एडवर्ड्स गुण स्कोरगुगल एडवर्ड्स गुण स्कोर.htaccessलोगो अनुकूलनमोबाइल परिभाषागैर- wwwगुण स्कोरसामाजिक मिडिया मार्केटिङवेबसाइट अनुकूलनwww
जुन 25, 2008 मा 7: 32 PM
यदि म ईमेलको डिजाइनर / लेखक हुँ भने म डेफ गर्दछु। कम्तिमा १/२ द्वारा प्रतिलिपि काट्नुहोस्। तपाईं सामग्री को अर्को पृष्ठमा केहि लेख लिंक गर्न सक्नुहुनेछ।
ईमेलको लागि धेरै प्रतिलिपि गर्ने तरिका।